भाषा थोपाई जिब्रो काट्ने षड़्यन्त्रः डा. नामदुङ – खबरम्यागजिन
HomeBreaking Newsभाषा थोपाई जिब्रो काट्ने षड़्यन्त्रः डा. नामदुङ
सभामा उपस्थित शिक्षकवर्ग अनि विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरु
सभामा उपस्थित शिक्षकवर्ग अनि विभिन्न स्कूलका शिक्षकहरू
बङ्गला भाषा थोप्ने कार्यलाई नेपाली साहित्य सम्मेलन दार्जीलिङले जिब्रो काट्ने षड़्यन्त्रको संज्ञा दिएको छ। आज यहाँको गोर्खा रङ्गमञ्च भवनमा आयोजित समीक्षा सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाली साहित्य सम्मेलनमा वरिष्ठ सदस्य एवं नेपाली अकादमी पुरस्कारबाट सम्मानित भइसकेका दिग्गज साहित्यकार डा. जीवन नामदुङले बङ्गाल सरकारले स्कूलहरुमा जबर्जस्ती बंगला भाषा थोप्ने गरिरहेको पहलको कठोर शब्दमा आलोचना गर्दै गोर्खा जातिको जिब्रो काट्ने षड़्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाए।
कुनै मानिसको जिब्रो काटे उनी केवल इशारामा बोल्ने हुन्छ अनि राज्य सरकारले गोर्खा जातिलाई यस्तै इशारामा बोल्ने बनाउने षड़्यन्त्र गरिरहेको छ। यसैले आजको यो समीक्षा सभाको निर्णय कठोरभन्दा कठोर विरोध हुनपर्छ, उनले प्रस्ताव पेश गरेका थिए। उनले भने-कुनै पनि जाति जतिनै सम्पन्ननै किन नहोस्, त्यस जातिले अर्काको भाषा सापटी लिनपरे, सम्पन्नताको कुनै अर्थनै हुँदैन। यसैले नेपालीभाषी गोर्खा जातिको आफ्नो भाषा छ र यस भाषालाई राज्य सरकारले सम्मान गर्नुपर्छ। यसैले आदान-प्रदानको हिसाबमा राज्यले बङ्गालभरि बङ्गला भाषा अनिवार्य गर्छ भने नेपाली भाषालाई पनि राज्यभरि अनिवार्य गरेर देखाओस्।
किनभने, नेपाली भाषाले पनि संवैधानिक मान्यता पाइसकेको छ। उनले राजवंशी भाषा विलुप्त भएर गएको विवरण पेश गर्दै भने-राजवंशी राजाका वंशहरु हुन्, तर बंगालमा यस समुदायलाई जबर्जस्ती बंगला भाषा अप्नाउन लगाइयो अनि बिस्तारै यस जातिले आफ्नो भाषानै गुमाउन परेको छ। यस्तै षड़्यन्त्र नेपाली भाषामाथि पनि शुरू भएको छ। जसको शुरूआत गत वर्षको 13 जुलाईदेखिनै भएको हो। उनले भने-यदि बंगला भाषालाई राज्यका गोर्खा वा नेपालीबहुल इलाकामा वैकल्पिक भाषाको रूपमा लागू गर्छ भने भन्नु केही छैन, तर यसलाई जबर्जस्ती लागू गर्नु कदापि उचित हुँदैन। यसैले राज्य सरकारको यस्तो प्रस्ताव वा निर्णयको कठोरभन्दा कठोर विरोध हुनपर्छ।
उनले भने-हाम्रो भाषा हामीलाई राम्रो लाग्छ, तर यसलाई ओझेलमा पार्ने षड़्यन्त्र 60-को दशकदेखिनै भइरहेको छ। 60-को दशकमा पनि हाम्रो भाषामाथि यसरीनै अतिक्रमण हुँदा व्यापक विरोध भएको थियो अनि यस नयाँ महायुद्धमा पनि हाम्रो जीत अवश्यै हुनेछ। तर आफ्नै घरमा विभीषणहरु जन्मिनु हुँदैन। उनले अझै अघि भने-कुनै पनि जातिलाई खत्तम पार्नु हो भने सबैभन्दा पहिले उसको भाषालाई खत्तम पार्नुपर्छ भन्ने विषयलाई चरिथार्थ पार्नको लागिनै राज्य सरकारले यस्तो षड़्यन्त्र गरिरहेको छ। यसलाई हाम्रो जिब्रो काट्ने षड़्यन्त्र हो भन्ने मान्नुपर्छ र यसको हामीले ठाड़ै विरोध गर्नुपर्छ। यसैबीच, हिल कलेज प्रोफेसर एसोसिएशन, गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन, नेपाली साहित्य अकादमी, प्रधान अध्यापक सेकेन्डेरी एसोसिएशन अनि सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थानका प्रमुखहरुले पनि बंगला भाषा थोप्ने विषयको कठोर विरोध जनाए भने यसको विरोधमा सड़कमा ओर्लिन परे पनि पछि नहट्ने वाचा गरे।